Umvelisi kunye noMthengisi weSithuthuthu waseTshayina | URuiyi
Isithuthuthu senziwe ngerabha, ukunxiba okunganyangekiyo, anti-skid, ubungqina bokuhlaba, ukumelana neinyembezi, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi, ukusebenza ngokuchanekileyo. Njengomvelisi wamavili esithuthuthu, sinokwenza zonke iinkcukacha, ezilungele isithuthuthu, zilungele ukufakelwa ngakumbi, kunye nobukhulu bamavili esithuthuthu nawo anokwenziwa ngokwezifiso. Ubume besakhelo esitsha siphucula kakhulu uzinzo lwezithuthuthu, ukuqhuba ngokuchanekileyo kunye nokubaluleka okungcono kokuphuma kwekona.
Itayara lesithuthuthu yenziwe irabha, ukunxiba okunganyangekiyo, anti-skid, ubungqina bokuhlaba, ukumelana neinyembezi, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi, ukusebenza ngokuchanekileyo.
Njengomvelisi wamavili esithuthuthu, sinokwenza zonke iinkcukacha, ezilungele isithuthuthu, zilungele ukufakelwa ngakumbi, kunye ubungakanani amavili ngesithuthuthu kunokuba njalo wena.
Ubume besakhelo esitsha siphucula kakhulu uzinzo lwezithuthuthu, ukuqhuba ngokuchanekileyo kunye nokubaluleka okungcono kokuphuma kwekona.
Isetyenziselwa izithuthuthu njengamavili esithuthuthu.
Region Ummandla wentengiso
EMzantsi-mpuma weAsia, iYurophu, iMelika kunye neAfrika zezona ndawo ziphambili zentengiso.
Amavili ethu ikakhulu enziwe ngerabha. Sebenzisa irabha njengezinto eziphambili ezinokuthi ziphucule uzinzo kunye nokuchaneka kwetayara, kwaye ineempawu zokumelana nokunxiba, ukumelana neskid, ukumelana nokuhlaba, ukumelana neinyembezi, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu kunye nokumelana neqondo lobushushu eliphantsi.
Uzinzile, ngqo, umsebenzi ococekileyo kunye nokukhethwa kwezinto ezintle ezenziwe ngerabha, ukumelana nokunganxibiisiliphu, anti-hlaba, anti - iinyembezi, ubushushu obuphezulu kunye nokumelana neqondo lobushushu eliphantsi.
Ukuchaneka kokuchaneka, zonke iinkcukacha ukufezekisa ukulunga okungcono ngemoto kunye nofakelo olulula ngakumbi ubungakanani ngokwezifiso.
"Ubomi obude", "ukuPhatha ngokuGudileyo" kunye "nokuKhwela intuthuzelo" zezona zinto ziphambili isithuthuthu iTire.
Itayara elingasemva linokubanga ubomi obude kangangesihlandlo esi-2.7.
Ngu ukunciphisa ukuhanjiswa kwentshukumo , ibonelela ngokuhamba ngokukhululekileyo kwaye inceda ukuthintela ukudinwa, nokuba ukhenketha imigama emide.
Ukusebenza okuzinzileyo kunye nangaphezulu ukuzinza.
Ubume besakhelo esitsha siphucula kakhulu indlela isithuthuthu uzinzo lwe-braking, ukuqhuba ngokuchanekileyo kunye nokubaluleka okungcono kokuphuma kwekona.
Iqondo eliphantsi lokususwa kwesidumbu lenyusa ubhetyebhetye kunye nokuqonda kwamavili esithuthuthu.
Kukho indawo egudileyo yamagxa eqinisekisa ukubambelela ngokugqibeleleyo xa uncike kwii-angles eziphakamileyo.
Ukuphuculwa kokubambelela okumanzi nokomileyo.
Nimble, ukuphathwa kwangaphambili.
* Uyilo lwembonakalo kunye nefomula yenyathelo lokunyathela,
Yenze inxibe kakuhle
* Ulungelelwaniso loyilo lokunyathela kunye nolwandle
Ukwanda komyinge, ukuphucula ukhuseleko lokuqhuba ngeentsuku zemvula
Ngomsebenzi wokubamba omanzi
* Uyilo olugqibeleleyo lolwakhiwo lubonelela ngokulungileyo
* Ifomula yecomputer egqibeleleyo
* Ukujika kukhuselekile kwaye kunika ukubambelela okuhle
Umhlaba kunye nokutsalwa
* Uyilo lweSIPE ukomeleza ukubambelela okumanzi phakathi kwamatayara
Nyanzela ukomeleza umphumo wokuhambisa amanzi
* Uyilo lwepateni yesikhokelo lubonelela
Isakhono esihle kakhulu sokubambisa
Jonga incwadana yemveliso yofakelo oluthile.
Yongeza thumela i imeyile ukuya intengiso@ruiyitools.com
Umgangatho wempendulo yomthengi ulungile, uyasebenza kwaye ulula, umthamo wokuthwala umthwalo, ubomi benkonzo ende, indibano efanelekileyo.
Yiba ngumthengi olandelayo wokujonga kwakhona le nto.
Isithuba seMvelaphi Qingdao, China
Igama leRandi IJunmei
Ukusetyenziswa Ulwandle lwangaphandle uhambo lokuhamba ngeentaba
Umbala Umbala esingabizi
Ilogo Elungiselelweyo Ilogo
Amandla okubonelela 50000 Piece / Pieces Unyaka ngamnye
Izibuko leQingdao e China
Ixesha lokhokelo Ubungakanani (Amacandelo) 1-300> 300Est. Ixesha (iintsuku)
Egqithileyo Itreyila yebhayisekile
Okulandelayo: Abavelisi baseTshayina bamavili ezithuthuthu
Q: Ngaba imveliso yakho inokuzisa uphawu lwendwendwe?
Q: Ngaba ungazichonga iimveliso zakho?
Q: Zenziwe njani iimveliso zakho? Zeziphi izinto ezikhoyo?
A: Ukuphuhliswa okuzenzekelayo okanye okwenziwe ngokwezixhobo: intsimbi, isinyithi, iplastiki, ilaphu, njl
Q: Kuthatha ixesha elingakanani ukukhula kwakho sokubumba?
A: iintsuku ezi-7
Q: Ngaba uhlawulisa ukungunda? Yimalini? Ndingayibuyisa? Uyibuyisela njani?
A: Umrhumo womrhumo wokubumba, ukucaphula ngokwemeko ethile yemveliso kunye nobungakanani.
Umbuzo: Usebenza ixesha elingakanani ukusebenza kwakho? Ungayigcina njani imihla ngemihla?
A: Umthamo ukungunda nganye
Q: Mingaphi iminyaka elishumi kucocwa kwaye kugcinwa okuqhelekileyo?
A: Umthamo wemveliso uxhomekeke kwinani lomngundo owahlukileyo.
A: Umthengi ugqiba ubungakanani bemveliso, isitayile, ikoteyishini, ikhontrakthi, intlawulo, imveliso kunye nokuhanjiswa
Q: Lithatha ixesha elingakanani ixesha lokuhambisa imveliso?
A: iinyanga ezi-2-3, isiseko esithile kunye nobungakanani
Umbuzo: Ngaba unayo ubuncinci beodolo yeemveliso zakho?
A: Ukuba kunjalo, yintoni ubuncinci be-odolo yobungakanani? Hayi,
Q: Inkampani yakho inkulu kangakanani? Lithini ixabiso lemveliso yonyaka?
A: 800 square metres, ixabiso imveliso 50 billion
Q: Kude kube nini ubomi benkonzo yeemveliso zakho?
A: iminyaka emi-3-5 ngokwe-avareji, kuxhomekeke kwimeko ethile yemveliso,
Q: Zeziphi iindidi ezithile zeemveliso zakho?
A: 1. Iindlela zokulungisa iimoto
2. Isithuthi sangaphandle solonwabo
3. Izixhobo zegadi (indawo yokugcina iintyatyambo kunye negreenhouse)
4. Indawo ebiyelweyo izilwanyana zasekhaya
5. Imoto yezixhobo zegadi
6. ivili DB
7. Ivili lerabha
8. Ithambeka le-atv
Q: Zeziphi iindlela zakho zokuhlawula ezamkelekileyo?
A: Ukutshintshwa kwebhanki
Q: Ngawaphi amaqela kunye neemarike iimveliso zakho ezifanelekileyo kuzo?
A: Amaqela obomi bemihla ngemihla,
Q: Ngawaphi amazwe kunye nemimandla apho iimveliso zakho zithunyelwe khona?
A: i-USA, Canada, UK, France, America, Europe, njl
Q: Ngaba imveliso yakho iyabiza? Zithini izibonelelo ezithile?
A: Ewe, imveliso efanayo, sinezinto ezingcono kunye nexabiso.
Q: Ngaba inkampani yakho inxaxheba mboniso? Zithini iinkcukacha?
A: Thatha inxaxheba kwimiboniso, e-China yokuThengisa nokuThumela ngaphandle, njl
Kwizinga eliphezulu Imfono Chinese Isixhobo kwinqwelo Trailer g ...
Umgangatho ophezulu waseTshayina weSithuthuthu oMandla oShukumayo
Ukubonelela nge-China China uMgangatho oPhakamileyo we-4.00-8 Wheelbarro ...
Ukuthengisa kumzi mveliso China ivili ngerabha yewholesale
Umenzi we-OEM china roller roller
Supply OEM China 420mm * 1.9m Sublimation Ikhalenda ...
Ivili likaCaster, Isondo le-China PU, DB Ivili, I-China i-PU Foam Isondo, Umxube weKhonkrithi yase China, Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils,